TOP NEWS: Xulka Qaranka Soomaaliya oo guul taariikhi ah ka gaaray ciyaar ka tirsan isreeb-reebka Koobka Adduunka +(SAWIRO) | HalQaran.com
TOP NEWS: Xulka Qaranka Soomaaliya oo guul taariikhi ah ka gaaray ciyaar ka tirsan isreeb-reebka Koobka Adduunka +(SAWIRO)
SPORT (Halqaran.com) – Xulka kubadda cagta Qaranka Soomaaliya ayaa guul taariikhi ah ka gaaray heerka koowaad ee isreeb-reebka ciyaaraha koobka adduunka 2022.
Xulka Qaran Soomaaliya ayaa xalay 1-0 ugu awood sheegtay xulka dalka Zimbabwe, kulankii lugta koowaad oo dhacay dalka Jabuuti oo marti galinta wakiil ugu ahayd Soomaaliya.
Ciyaaryahanka Anwar Siciid Cali (Shakunda) ayaa xulka Soomaaliya kubbad madaxa ugu dhaliyay daqiiqadii 87-aad ee dhaammaadkii ciyaarta.
Waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya kulan ka tirsan isreeb-reebka koobka adduunka ay guul ka gaarto, tan iyo markii la asaasay tartankan 1930-kii.
Madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo xisbiyada mucaaradka ayaa u hambalyeeyey xulka qaranka, sidoo kale shacabka ayaa aad ugu hambalyeynaya guusha taariikhiga ah.
Kulan lugta labaad ayaa dalka Zimbabwe ka dhici doona 10-ka bishan September ee todobaadka dambe, waxaana Soomaaliya haddii ay soo baxdo u gudbi doontaa is araga labaad ee isreeb-reebka koobka adduunka.
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaan waligeed ka qeyb galin tartanka ugu weyn kubadda cagta caalamka ee loo yaqaanno World Cup-ka (Koobka Adduunka), tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1930-kii.
Si kastaba, Koobka Adduunka 2022, ayaa waxaa marti-gelineysa horeyna ugu guuleystay dalka yar ee qaniga ah ee Qadar.
Ciyaar xiiso leh
guul taariikhi ah
oo ka guuleystay Zimbabwe
Xulka Qaranka Soomaaliya